Mgbasa ozi: Jikọọ, Jikwaa, ma nyochaa Data Ọrịre Gị | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 12, 2019 Na Mọnde, Nọmba 12, 2019 Douglas Karr
Otu oru ngo m na-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka otu n'ime ndị ahịa m bụ ịmepụta ụlọ ahịa na-ere ahịa nke na-enye ụfọdụ ezigbo data iji mee mkpebi. Ọ bụrụ na nke ahụ dị mfe, ọ gaghị adị.
Ọ dịghị mfe. Ọchịchọ ọ bụla, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ecommerce, yana nyocha nyocha nwere ụzọ ha si esi nweta data nsuso - site na mgbagha itinye aka na ndị na-alọghachi ma ọ bụ ndị ọrụ ugbu a. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana imirikiti nyiwe anaghị eme ọfụma na ịpị ma ọ bụ dọpụta data gaa na nyiwe ndị ọzọ. Ka anyi che ya n ihu… onye osompi dika Facebook agaghi ewuli ihe nketa nke Google Data Studio ka ndi mmadu nwee ike ijiko data ha na ntaneti ya.
Ihe ikpo okwu obula nwere uzo iji zipu data site na API ha, n’agbanyeghi, ma enwere nyiwe nke na-akwado nke a iji nyere aka ulo oru aka iru ha. ahia ọgụgụ isi.
Ngwaọrụ m na-etinyekarị oge na ya bụ Google Data Studio. Maka ọgụgụ isi azụmaahịa na - akwụghị ụgwọ, ịkọ akụkọ, yana usoro ntanetị - a gaghị enwe ọnụ ahịa efu. N'ụzọ dị mwute, n'ihi na ọ bụ nke Google, ị gaghị ahụ ndị egwuregwu ndị ọzọ ka ha na-agbakọ iji wuo njikọ ndị mmekọ na data ha. N'ihi ya, ọtụtụ nyiwe nke atọ na-arị elu. Otu n'ime ndị ahụ bụ Nsogbu.
Ọdachi na-enye azịza atọ:
Datatap Ọdịdị - Jikọọ data sitere na ọtụtụ sistemụ ma zipụ ebe ọ bụla site na ị na-akpaghị aka na nnakọta data, nkwadebe na njikwa.
Nghọta Adverity - Ogwe ahaziri ahaziri nye gị ezigbo nkọwa nke ahịa na arụmọrụ azụmaahịa gị. Jikọọ data ziri ezi na dashboard ziri ezi maka ndị ziri ezi.
Mgbaàmà PreSense - N'iji ọgụgụ isi, PreSense na-ekpughere njikarịcha ohere site na itinye ego mmụta igwe na ọnụ ọgụgụ dị elu. Site na iji nchọpụta anomaly, nchọpụta data na itinye ego na-atụ aro, ụlọ ọrụ nwere ike ịgbanwe ike nke nyocha ahịa ha.
Jikọọ ma rụọ ọrụ na mgbasa ozi gị niile, ahịa na e-commerce. Na nwa afọ ohere ọtụtụ narị ahia data isi mmalite. Adverity na-achikota data granular site na ngwa oru di iche iche na ada. Ha etinyewo ihe niile: site na ego, ịre ahịa na data ihu igwe.
Nsogbu na-enye gị ike ileba anya na njem ndị ahịa niile karịa ka ọ dịbu. Gwakọta na mbụ iyi data data iji nweta nkọwa zuru ezu banyere azụmaahịa ndị ahịa gị.
Tinye data gị niile na mkpịsị aka gị wee rite uru na ya nnukwu mmụba na arụmọrụ. Enweghị mkpa ịgbanwe n'etiti nyiwe iji nweta data gị. Enweghịzị jiri aka gị na-akwadebe datasets maka nyocha. Kama, ịnwere ike ilekwasị anya na akụ gị iji kpughee nghọta ọhụrụ ma mepụta uru bara uru sitere na data.
Etinye ego na ahia nke data bu mpaghara nke ulo oru na enweta ezigbo ego. Dị ka otu akụkọ si n'aka Winterberry Group na Global Direct Marketing Association (GDMA), banyere 80% nke ndị zara hụ data ndị ahịa dịka ihe dị oke mkpa na mbọ ahịa ha na mgbasa ozi.
Kedu ihe ahịa Data-Driven?
-Re ahia data bu uzo nke ichota nkwuputa ahia nke dabere na ozi ndi ahia. Ndị na-ere ahịa data na-eji data ndị ahịa na-ebu amụma banyere mkpa ha, ọchịchọ ha na omume ha n'ọdịnihu. Nghọta dị otú a na-enyere aka ịmepụta atụmatụ azụmaahịa ahaziri iche maka mbugharị kachasị elu na ntinye ego (ROI).
Eugen Knippel, Ọdịmma
Ọmụmụ ihe: Otu esi etinye Mindshare nke Mmekọrịta Data na Ndị Ahịa
Mindshare Netherlands bụ ụlọ ọrụ Dutch nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ. Karịa ndị ọrụ 7,000 gafee ụwa, Mindshare na-ahụ maka imirikiti nke GroupM na WPP maka mgbasa ozi ahịa ụwa. Iji jikwaa nnukwu ọrụ dị otú ahụ, ụlọ ọrụ ahụ anọwo na-ele anya maka ngwá ọrụ ịzụ data nke nwere ike ịkwalite nchịkọta data, njikọta, na ịkọ akụkọ maka ndị ahịa ya. Ebumnuche ndị a ugbu a, site na enyemaka nke Adverity.
Dezie KPI gị
Ihe dị oke mkpa na azụmaahịa data a na-eme n'oge a bụ iji usoro azụmaahịa agbachitere n'ofe ọwa mgbasa ozi niile. A na-eme ka ọ dị mfe ịga ahịa arụmọrụ na-eme ka ọ dị mfe mgbe enwere usoro ahaziri ahazi maka KPI niile. Nke a na-eme ka e nwee nkwekọ na etu esi ahazi data, n'agbanyeghị ebe data sitere.
Ọdachi na-enye ohere iji wepụta nnukwu mapụ nhọrọ dị oke egwu ma jikwaa nke mejupụtara usoro arụmọrụ gị niile ka ị nwee ike iji apụl tụnyere apụl ndị ọzọ ejikọtara ọnụ. Nke a na - enye ndị na - ere ahịa ohere ịgụnye ndị niile na - ege ha ntị ma ọ bụ nke data dị n’ime otu metrik ma ọ bụ akụkụ, na-enyere ha aka ime mkpebi azụmaahịa gụrụ akwụkwọ na ọgụgụ isi.
Debe ngosi ngosi
Tags: oghomdata nchekwa datanghọta adverityihe ize ndụnjikọ datadata isi mmaliteexcelgoogle data studionkwekọmpụgaSnowflake